Medical Device akpụzi Nsukka na Suppliers - China Medical Device akpụzi Factory
Medical ngwá ọrụ ekpuchi plastic ebu
Ọtụtụ iri afọ nke injinịa nkenke ọgwụ ebu maka ọgwụ na ahụ ike na ngwa, Yuanfang enwetawo ọtụtụ ahụmahụ na mepụtara pụrụ iche ọhụrụ lekwasịrị anya na-egbo mkpa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ahụike.
Yuanfang Technology bụ ihe ISO9001: 2015 asambodo factory n'ilekwasị anya na-emepe emepe, imewe na n'ichepụta plastic ọgwụ Ebu na plastic kpụrụ akụkụ maka ọgwụ na ahụ ike na ngwaọrụ.
Medical plastic akụrụngwa ọgwụ ebu
Enwere ngwa na ngwa dị iche iche nke ịkpụzi ọgwụ na-akwado na ngalaba ọgwụ gụnyere akụrụngwa, akwara ịwa ahụ, agịga ， tubes
N'ime iri afọ ndị gara aga, Yuanfang Technology ewetawo nkenke injectioning tooling na kpụrụ akụkụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu ngwaọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị dị n'ụwa. Ebu ọgwụ, gụnyere ngwaahịa ọgwụ a na-ekpofu ekpofu, akụrụngwa ahụike dị n'ime ya na ụlọ plastik.
Ebu ndị na-ebu ọgwụgwọ dị elu na-adabere na usoro nhazi ebu.
Yuanfang na-eji ihe ndị kasị elu imewe software nyochaa ebu, nke mere na ike zuru ezu mata ntụpọ ke imewe, lelee ma ebu nwere nsogbu nke Weld akara, warpage, shrinkage, wdg, melite imewe arụmọrụ, na ike elu àgwà na elu nkenke Medical ebu.
Anyị imewe otu nwere ọtụtụ ahụmahụ na optimizing na Ọdịdị nke plastic ebu akụkụ, na-ezere ihe ngwọta ntụpọ n'ihu n'ichepụta Ebu, na-azọpụta na-akwụ ụgwọ na shortening gị development oge.
Na Yuanfang họpụtara a oge oru ngo engineer n'ihi na ị na-eme ka ị na-aghọta na ọganihu nke oru ngo, n'ihi na ihe atụ, na-enye kwa izu oge kwa izu, si oru ngo mmalite ka ebu nnyefe, na dum usoro bụ uzo gị.
Na Yuanfang, ma ebu ahụ bụ otu oghere ma ọ bụ ọtụtụ oghere plastik plastik maka ngwaahịa ọgwụ, anyị nwere ike rụpụta prototypes, nkwenye ebu, na usoro ebu.
Nkịtị nkịtị na isi ígwè: S136, H13, 8407, NAK80, wdg.
Ngwaahịa: eyi, ABS, PC, HDPE, PS, PBT, PA6 + GF, POM, PC / ABS, TPE, TPU, wdg.
Ndụ ebu nwere ike ịbụ nde 1.5.
Enwere ike mepụta ebu ahụ na ịdị arọ nke 15T na oke kachasị nke 1M.
Anyị guzosie ike ezi mmekọrịta nke imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa na Europe, America na Southeast Asia Site plastic ebu.
Kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma banyere ebu anyị ọgwụ na ọgwụ na ọgwụ ịkpụzi ọgwụ, ma ọ bụ rịọ maka ọnụego taa. Anyị bụ ndị gị Premiya ọgwụ plastic injection ịkpụzi na ọgwụ na ahụ ike prototype development ọkachamara.
Ọgwụ na ịkpụzi Ogo Control Filiks
Quality nkwa bụ isi mgbe ọ na-abịa plastic injection ịkpụzi, YF akpụzi anamde àgwà akara ofụri dum n'ichepụta usoro. Anyị plastic ịkpụzi àgwà akara e ike niile Filiks iji hụ na ndị ikpeazụ ngwaahịa ị na-enweta osobo gị nkọwa. Usoro nke ịkpụzi ihe eji akpụ akpụ akpụ bụ ihe ndị a.
Nnyocha ihe onwunwe
A na-enyocha ihe niile iji ruo eruo. Enwere ike inye akwụkwọ COA, RohS na REACH.
Parts na-ibido nyochara nke ịkpụzi igwe. A na-azụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ka mma iji chọpụta ma mezie ntụpọ ndị a:
• Ihu ncha
• Short gbaa
• Akara ọkụ
• Akara ngosi Flash
FAI - Nnyocha Nke Mbụ
Ihe nyocha nke mbụ (FAI) na-egosipụtaegbula ibu ọrụ nke imepụtara ngwa ahịa gị na nkọwapụta. A ga-enyocha ma dekọọ atụmatụ ọ bụla dị oke egwu akara na eserese akụkụ ahụ. Anyị na-eme FAI na usoro ọhụụ ọ bụla ma nwee ike ịnye data FAI mgbe ịmechara usoro ọ bụla mgbe ọ dị mkpa.
PPAP: Usoro Nhazi Nke Mmepụta
Usoro mmepụta anyị na-eme ka ndị ahịa na ụlọ ọrụ niile nwee ntụkwasị obi na usoro mmepụta anyị. Emeputara ihe eji emeputa ihe meputara ma jiri ya mezue ule di iche iche n'oge PPAP. Nke a na ụdị plastic ịkpụzi àgwà akara Aims iji hụ na anyị imewe na mmepụta Filiks izute ahịa chọrọ.
Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Plastic Fanye Nkedo, Omenala akpụzi, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ndị na-emepụta ebu ebu, Akpụzi Factory,